Mubvunzo - Ndezvipi Zvinhu Zvinobvisa Humhandara? Mubvunzo - Ndezvipi Zvinhu Zvinobvisa Humhandara?
Mubvunzo - Ndezvipi Zvinhu Zvinobvisa Humhandara?
Chinhu chimwe chete chinobvisa humhandara. Kuiswa nechombo chomurume. Kana usina kuiswa nomurume usi mhandara zvisinei kuti wakabvaruka chivharo here kana kwete.
Unokwanisa kubvaruka chivharo pane zvakawanda zvimwe zvacho ndeizvi:
1. Kuchovha bhasikoro
2. Kutamba maSPORTS kuchikoro
3. Kushandisa ma Tampon uri kumwedzi
Hazvirevi kuti wabva humhandara. Mhandara zvinoreva musikana asanhi aziva murume. Kuziva murume kupinzwa chombo kumashure kana kuti muchitubu.
Unokwanisa kugaroiswa nomukomana wako kumashure asi usina kubvaruka chivharo. Unenga usiri mhandara.